डिभोर्सबारे बोले मनोज गजुरेल,दिए मर्मस्पर्सी सन्देश "यस्तो छ नालीबेली यथार्थ विवरण" | NewsSudur
डिभोर्सबारे बोले मनोज गजुरेल,दिए मर्मस्पर्सी सन्देश “यस्तो छ नालीबेली यथार्थ विवरण”
काठमाडौँ / हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद हुनुको कारण खोलेका छन्। दुई दशक भन्दा बढी समय मिना ढकालसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका गजुरले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै फरक परिवेश र जीवनशैलीका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, वैवाहिक जीवनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै हाम्रो समान्य मतभेद हुँदै आएको थियो। तर हाम्रा सन्ततीको भविष्यका लागि सकेसम्म मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका थियौँ, तर यसलाई जिवन्त बनाउन सकेनौँ । त्यसैले पारिवारीक सहमतिका आधारमा हामीले कानुनी रुपमा छुट्टीने निर्णय गरौँ ।
मनोज गजुरेलको फेसबुक स्टाटस-
मेरो पारिवारिक सम्वन्धका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार, टिका टिप्पणी, जिज्ञासा र समाचारप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ । हामी (मीना ढकाल र मनोज गजुरेल) बिगत दुई दशकभन्दा बढि समयदेखी बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका हौं । हामीबाट एक छोरा र एक छोरी (मिरोज र मेमोरी¬)को जायजन्म भएको छ । हामी अलग परिवेश र फरक जीवनशैलीबाट आएको हुनाले होला, हाम्रो वैवाहिक जीवनको करिब प्रारम्भिक चरणदेखि नै सामान्य मतभेद हुँदै आएको थियो । हामीले हाम्रा सन्ततीको भविष्यका लागि पनि सकेसम्म मिलेर अगाडि बढ्न प्रयत्न गरेका थियौं तर यसलाई जिवन्त बनाउन सकेनौं । त्यसैले पारिवारिक सहमतिका आधारमा हामीले कानुनी रुपमै छुट्टिने निर्णय गऱ्यौं । यस क्रममा छोरी आमाको र छोरो बाबुको अविभावकत्वमा रहनेगरी सम्पतिलाई दुवै पक्षका परिवारको रोहबरमा चार भाग लगाई बांडफांड गरेका छौं ।
एउटा सामाजिक ब्यक्तिबाट यस्तो दुखद घटना जानकारी गराउनु आफैंमा सकारात्मक बिषय होईन । जीवनका धेरै पाटाहरु मध्ये पारिवारिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो सफल पार्न नसकेकोमा तपाईंहरुसमक्ष क्षमाप्रार्थी छु । हामी दुबै गलत होइनौं तर फरक रहेछौं । त्यसै कारणले होला, दुई दशकभन्दा लामो सम्वन्ध जोगिएन । यो संवदनशिल घडीमा हाम्रा दर्शक, श्रोता, पाठक, आफन्त, परिवारजन एवं सम्पूर्ण शुभ चिन्तकहरुमा आग्रह गर्न चाहान्छु कि म, मिनाजी, हामी दुबैका परिवारजन र हाम्रा सन्ततीको जीवनमा तपाईंहरुबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । अन्त्यमा, विवाहपूर्वको प्रेम, वैवाहिक जीवनको अनुभव र सन्तानसुखको मिठो अनुभूतिकालागि मिनाजीलाइ म अन्तर हृदयबाट धन्यवाद सहित सफलताको कामना ब्यक्त गर्दछु । सबैको मंगल होस् ।
के भन्छिन आखिर मिना ढकाले
मैले मीनालाई घरबाट निकालेको होइन: मनोज गजुरेल
मीनाजीसँग तपाईंहरुको सुरुदेखि नै मन नमिल्ने रहेछ, अहिलेसम्म सँगै बस्ने बाध्यता के थियो ? परिवारमा सामान्य झगडा सबैका हुन्छन् । हाम्रो पनि हुन्थ्यो । उनी असाध्यै रिसाउँथिन् । यसले मलाई असाध्यै तनाब हुन्थ्यो । तर, नेपाली समाजमा स-साना कुरामा डिभोर्स गर्नु राम्रो हुँदैन, उनीसँग पो मेरो मन मिल्दैनथ्यो । उनका बा-आमाले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरु मेरी छोरी अलि रिसाउँछिन्, एकजना आगो हुँदा अर्को पानी हुनुपर्छ भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो । अर्को कुरा मेरो पेशाको प्रवृत्ति, प्रकृति र परिवेशले पनि त्यो गर्न दिँदैनथ्यो । म परिवारका कुरा मेरा दर्शक र पाठकसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्न थिएँ । त्यसले झगडा भएको अवस्थामा बाहिर निस्कन्थेँ । वा ठूलो आवाजमा क्यासेट बजाउँथें । यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मेरो सोच थियो ।
मीनाजीको आरोप छ, तपाईंसँग अरूका लागि समय हुन्थ्यो, तर उहाँका लागि कुनै समय हुन्नथ्यो म व्यस्त मान्छे । जुन आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो केही हदसम्म सत्य पनि होला । तर, मेरो पेशा नै त्यस्तै छ । यसमा म के गर्न सक्छु ? उहाँ र मबीच भएका अन्तरवार्ताहरु यु ट्युवमा हेर्नुभयो भने उहाँ आफैंले मलाई काउकुती लगाएर हँसाउनुहुन्छ, सकेसम्म समय दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ । हामी सँगै बेलायत लगायत विभिन्न देशमा गएका छौं । मेरो प्रस्तुति हुँदा उहाँलाई पनि मञ्चमा बोलाएर चिनाएको छु ।
उहाँले पटक-पटक डिभोर्स माग्नु भएको थियो रे हो ? उहाँ असाध्यै रिसाउनुहुन्थ्यो । एकपल्ट रिसाएपछि घरमा केही न केही टुटफुट हुन्थ्यो । यो रीसका बेला उहाँले डिभोर्स माग्नुहुन्थ्यो । तर, रीसमा भनिएका कुरालाई म महत्व दिन्न थिएँ । रीस एउटा मानसिक समस्या हो र ठीक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
तपाईंले यसका लागि प्रयास पनि गर्नुभयो ? हो, गरेँ । उहाँलाई चिकित्सक कहाँ लगेँ । उहाँले एउटा डाक्टरकोमा चित्त नबुझेपछि अर्कोमा जाउँ भन्नुभयो । त्यहाँ पनि गइयो । हामी दुबैले सँगै गएर केही समस्याहरु छन् कि भनेर आ-आफ्नो पनि उपचार गरायौं । बाहिर तपाईंका विषयमा नकारात्मक चर्चाहरु चलिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउनुभएको छ ? सुनिरहेको छु । युट्युबमा पनि हेरिरहेको छु । मेरो एउटा मात्रै भनाइ के छ भने हरेक विवाहित पुरुष र महिलाबीच जीवनमा सामान्य झगडा र विवादहरु हुन्छन् । घरभित्र भएका स-सना कुरालाई उछाल्ने अनि १८/२० वर्षअघि भएका सामान्य कुराहरुलाई अहिले इस्यु बनाउने काम नेपालमा मात्रै हुन्छ, वाहिर यस्ता कुरालाई उति महत्व दिइँदैन । नेपाली मिडियाले व्यक्तिहरुका के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।
अहिले मिडियामा आएका कुराहरुप्रति तपाईंको कुनै गुनासो छ ? मैले उहाँलाई घरबाट निकालेको होइन । सहमतिमै पारपाचुके गरेका हौंं । अंशवापत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि दिएको छु । छुटि्टँदा बाहिर एक-अर्कालाई दोषारोपण नगर्ने सहमति पनि भएको छ । कानुनअनुसार पाउनुपर्ने अंश लिएर उहाँ जानु भएको छ । हामी एक आपसमा बुझ्ने छौं । हामीले विवाद गर्दा छोराछोरीलाई के असर पर्ला भन्ने कुरा विचार गरेर बोल्नुपर्छ । छोराछोरीलाई अप्ठ्यारो पर्ने व्यवहार हामीले देखाउनुहुँदैन । मिडियाले पनि वालवालिकाहरुप्रति सम्वेदनशील भइदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
हामीले विवाह गर्दा पनि सहमतिमै गरेका थियौं र छुट्टिँदा पनि सहमतिमै अलग भएका हौं । अब यस विषयमा लामो कुरा गर्नुको अर्थ म देख्दिनँ । एक्लो जीवन त गाह्रो होला नि, अर्को विवाह नगर्ने ? एउटा विवाह त मैले राम्रोसँग सम्हाल्न सकिनँ, अर्को विवाह गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । तत्काल त्यस्तो कुनै योजना छैन ।
कलाकारिता नि ? अब के हुन्छ ? तपाईहरु सबैको माया पाएसम्म म यसलाई निरन्तरता दिनेछु । मीनाजीसँग २२ वर्ष बस्नुभयो, के के कुरा मीस गर्नुहुन्छ ? मीना राम्रो ‘ड्रेस सेन्स’ भएकी महिला हुन् । उनले मलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्थिन् । मीठो खाना बनाउँथिन् । ती कुरा मीस गर्छु । अहिले नयाँ व्यवसाय सुरु गरेकी छिन्, त्यो सफल होस् । विभिन्न अन्लाईनाहरुबाट ﻿